Cameras Body and cameras | Vahaolana OMG
Rehefa araha-maso akaiky an'ireo mponina izay tadiaviny ny mpitandro filaminana any Etazonia dia birao marobe no mitazona fakantsary azo ampiasaina mba hitaterana ny fiaraha-miasa amin'izy ireo amin'ny ankapobeny. Ny polisy sy ny mpiaro ny zon'ny olona dia mitovy amin'ny fahatokisan'ny fizotran-javatra teo amin'ny fiambenana dia hanampy amin'ny fanalefahana ny habibiana amin'ny manampahefana tahaka ny fiakarana tsy mahomby amin'ny fomba ataon'ny polisy amin'ny mponina. Na eo aza izany, ny tatitra navoaka ho an'ny herinandro teo dia miresaka momba ny hoe firy ny birao mitaky ny lalàna no mampahafantatra ny fisokafana momba ny fampiasana ireo fakan-tsary - sy ny firaketana ananan'izy ireo.
Ny fiantraikan'ny fakantsary vatana amin'ny olona sy ny tahan'ny heloka bevava:
Ny scorecard fakantsary fakan-tsary vao haingana indrindra avy amin'ny The Leadership Conference momba ny zon'olombelona sy ny zon'olombelona, ​​niara-niasa tamin'ny orinasa mpanolotsaina Upturn, dia nanara-maso ireo biraon'ny polisy 50 amerikana ary nilaza fa marary amin'ny ampahany betsaka amin'ny fepetra valo amin'ny fanadinana. Ireo zana-kazo ireo dia mampiditra ny fiarovana tsara ny fiarovana ireo voarakitra an-tsoratra na inona na inona manampahefana alohan'ny hanaovana antontan-taratasy momba ny tatitra ataon'izy ireo, hatraiza ny firaketana ny fandraisam-peo ary afaka mahita horonantsary anehoan'izy ireo ny olon-tsotra. Fikambanan'ny fitoviana ara-tsosialy isan-karazany, mpampiroborobo ny fiarovana ary loharanom-baovao no nanangana ny masontsivana tamin'ny Mey 2015 mba hisy fiantraikany amin'ny fomba fampiharana sy fampiasana ny birao ny fanavaozana.
Tsy nisy tamin'ireo fizarana ireo nahazo naoty naoty tamin'ny kilasy rehetra. Marshal 13 fotsiny no nilazana ny fahamarinana tany amin'ny faritra maro, araka ny filazan'i Wade Henderson, filoha sady CEO an'ny The Leadership Conference, famoriam-bola ho an'ny fahalalahana ara-tsosialy natao tamin'ny 1950 mba hiresahana amin'ireo fikambanana samihafa ao anatin'izany ny NAACP sy ACLU. Ny biraon'ny polisy tao Ferguson, Mo., ary Fresno, Calif., Dia nanao tsinontsinona ny fanatanterahana ny mason-tsivana na inona na inona. Ferguson dia nisarika ny fandinihana an'izao tontolo izao roa taona talohan'izay, raha ny polisy teo dia nitifitra nahafaty zazalahy afrikanina-amerikana Michael Brown, nahatonga ny adihevitra manerana ny firenena momba ny fomba nitondran'ny alàlana lalàna ny vitsy an'isa.
Manahy momba ny fampiasana fakantsary vatana:
Ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona dia miahiahy ihany koa fa ny fandaharana biometrika misy fahaiza-miaiky ny tarehy dia azo ampiasaina hampiavaka ny olona amin'ny sarimihetsika fakantsary, ary ny fakantsary faha-valo navoakan'ny scorecard dia manatona miankina amin'ny fiantsoana ireo teboka tapaka amin'ny fampiasana biometrika. Ny fanavaozana antenaina hahitana ny olona amin'ny fakantsary haingana dia mitaky fifangaroan'ny hery fikirakirana, fikajiana ary fiainana bateria fakan-tsary mbola tsy misy - na izany aza dia mety hiova haingana izany satria ny Taser International sy ireo mpamorona fakantsary fakan-tsary hafa dia mampitombo ny fahaizany mandraraka. Ankoatr'izay, ny fanekena ny tarehin-tsary natsangana amin'izao fotoana izao.
Ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona matahotra ny polisy dia hampiasa fakan-tsary ho fanadiovana fitaovam-pandinihana raha mijery ny manodidina ny vitsy an'isa, hoy i Henderson tamin'ny resadresaka natao ho an'ny daholobe. Birao vitsivitsy no naneho hevitra momba ireo ahiahy ireo tamin'ny fanerena torolàlana hanery ny fandatsahana ny fanavaozana ny fanekena ny tarehy — alohan'ny hidiran'ny rivotra. Ny Sampan-draharahan'ny polisy any Baltimore dia iray ihany tao anatin'ny scorecard voalohany an'ny Leadership Conference iray taona lasa izay ny tetikadiny dia manery ny fikarohana biometrika momba ny sarimihetsika ankehitriny. Ny scorecard farany teo amin'ny fihaonambe dia naneho fa ny polisy ao amin'ny County Baltimore, Boston, Cincinnati, Montgomery County, Md., Ary Parker, Colo., Dia manana fameperana biometrika fanampiny ihany koa.
"Ny fampiasana biometrika dia ho olana lehibe — fa tsy amin'ny ho avy lavitra loatra," hoy i James Coldren, manara-maso ny mpanatanteraka ho an'ny programa fitadiavana vola ao amin'ny CNA Institute for Public Research, fikambanana fikarohana sy fikarohana tsy mitady vola. “Mitovy amin'ny zavatra hafa rehetra izany. Ny biometrika dia mety hiteraka olana raha tsy voafehy na voamarina ary mampiasa izany fomba izany ny olona manana tanjona mahatsiravina. ” Coldren sy William Sousa, sefon'ny Ivotoerana momba ny heloka bevava sy ny fahamarinana ao amin'ny oniversiten'i Nevada, Las Vegas, dia mitondra ny famotorana momba ny programa fakana sary fakana sary nataon'ny fakàn-tsarin'ny fakàn-tsarin'ny fakantsary nataon'ny polisy Las Vegas Metropolitan. Tsy nifandray tamin'ny fanadihadiana momba ny Fihaonambe mpitarika izy ireo fa nahita tamin'ny fikarohana nataon'izy ireo fa, aorian'ny sakana sasany, ny biraon'ny polisy dia manasa fakantsary vaky volo. "[Tany Las Vegas] dia hitan'ny fizarana fa ny rakipeo dia ilaina ho an'ny marina sy mahatsiravina ho an'ny tompon'andraikitra," hoy i Coldren.
Na eo aza ny zava-misy eo amin'ny faravodilanitra, ny olana samihafa dia manery kokoa noho ny biometrika, hoy i Michael White, mpampianatra momba ny criminology ao amin'ny Arizona State University izay nanadihady fakan-tsary vita amin'ny vatana ho an'ny Sampan'ny Fitsarana Amerikanina (DoJ). “Naheno fifanakalozan-kevitra momba ny mety [fampiasana biometrika] aho nefa tsy fantatro izay fikambanana mandeha haingana mankany amin'io làlana io amin'izao fotoana izao.” Amin'ireo fepetra napetraky ny Fihaonambe mpitarika dia ny lehibe indrindra dia ny manoratra rehefa manoratra sy manao ahoana ny fiarovana ny lohahevitra ny tompon'andraikitra - indrindra ireo olona trandrahana tsy nahomby. Nipoitra ny ahiahy toy izany noho ny birao sasany nanao ny fantsona YouTube ho an'ny firaketana azy ireo.
Manahy momba ny famatsiam-bola amin'ny fakantsary:
Ny fizarazarana maro dia manondro ny vidiny ho sakana amin'ny fampiasana ny fanavaozana. Ireo fakan-tsary ireo dia afaka manitatra amin'ny vidiny $ 300 ka hatramin'ny $ 800 isaky ny tompon'andraikitra, miaraka amina dolara marobe marobe mihetsiketsika tsindraindray isam-bolana rehefa mitahiry tahiry rehefa elaela. Ny fandaniana dia tsy misy azo antoka fa sarotra fantarina: fitaovana, fanomanana ary tahiry fampahalalana. Ny volan'ny famatsiam-bola, ohatra, dia nihena ny fitakiana na ny fifandraisan'ny tambajotra kely, raha izany dia tsy mora vinavinaina izany, hoy i White, mpiara-miasa amin'ny vondrona manofana sy manampy amina birao manome alàlana ny lalàna izay manana tetikasa fakantsary dia vatsian'ny Program momba ny fanatanterahana ny fanamoriana ny birao an'ny DoJ's Bureau of Justice Assistance (BJA). Na izany aza, mihevitra i White fa ny ampaham-bidiny dia tsy hampifandanja. "Ny biraon'ny polisy goavambe sasany dia mandoa matetika $ 10 farafahakeliny tapitrisa isan-taona amin'ny tranga mahazatra," hoy izy. "Raha sanatria ka mampihena an'io isa io ny fakan-tsary mitafy vatana, dia zava-tsoa lehibe izany."
Ny BJA ​​dia mampiasa ny scorecard azy manokana hanombatombana ny fomba fakantsary ao amin'ny departemanta izay mampiasa ny fitsipi-pifehezana 17 ilaina amin'ny famatsiam-bola, ao anatin'izany raha asiana baiko ny manampahefana rehefa mila mampiasa ny fakan-tsary misy azy ireo sy ny fomba fampandehanana soa aman-tsara amin'ny firaketana PC. Misy fanamarinana manan-kery ireto làlana ireto dia manaiky ny famotopotorana toy izao: Nolavin'ny BJA ​​tamin'ny fomba ofisialy ny birao 19 tapitrisa mihoatra ny $ 73 tapitrisa any amin'ny firenena manerana ny firenena mba hividy frameworks fakan-tsary azo ampiasaina.
Ny fakantsary fiadian'ny polisy sy ny tsiambaratelo no farany niova: Septambra 26th, 2019 by Admin
4068 Total Views 10 Views Today